Wasiirka Maaliyadda C/raxmaan Beyle: "Waxaa laygu haystaa mashruuc ii fuli..." (Akhriso+Daawo) | Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Wasiirka Maaliyadda C/raxmaan Beyle: “Waxaa laygu haystaa mashruuc ii fuli…” (Akhriso+Daawo)
Wasiirka Maaliyadda C/raxmaan Beyle: “Waxaa laygu haystaa mashruuc ii fuli…” (Akhriso+Daawo)
Wasiirka Maaliyadda xukuumadda Soomaaliya C/raxmaan Ducaale Beyle oo maanta hortegay Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa si kulul uga hadlay eedeynta ay wasaaraddiisa u jeediyeen qaar ka mida Guddiga Maaliyadda Baarlamaanka.
Wasiirka oo ka hadlay warbixinta Guddiga ayaa hadalkiisa ku bilaabay: “Waxaan ka jawaabayaa eedeymaha faraha badan ee la ii soo jeediyay. Dadka qaar ayaa qaba in 2+2 ay tahay 3, waana khalad. Waxaa la soo gudbiyay warqad dhaleeceyn ah oo dhabarka ka jabinaysa dadka Soomaaliyeed. Waxaa dadaal weyn loo soo galay in aan bixino mushaarka ciidanka, lagana gudubno lacagaha faraha badan ee ah deymaha ah. Waxaan ku shaqaynaa nidaam caalami ah, waxaana nagula xiray 14 qodob oo habeen waliba nagula yiraahdo kasoo baxa. Guddigu waxay ahayd inay anaga nala tashadaan intii ay warqad u qori lahaayeen warbaahinta, anagaa ku jirna ceelka guntiisa. Arintaan waxa ay nagu noqotay dhabar jab iyo in dib noola celiyo”.
Wasiir Beyle yiri: “Su’aasha koowaad haddaan ka jawaabo: lacagtii shaqaalaha ayaa hoos u dhacday. Shaqaalaha waxaa ka yimid 37 kun, Imaaraadkana lacag kama imaan. Sacuudiga waxaa ka yimid 50 milyan, kuma soo dhicin Bankiga Soomaaliya; waxay ku dhacday akoon ku yaala Turkiga, halkaas ayaana laga maamulaa, waxaana faahfaahin doonta Gudoomiye Ku-xigeenka Bankiga”.
Wasiirka oo tix gabay ah goobta ka tiriyey ayaa ku dhaartay in aysan dhici doonin in hantida qaranka lagu takri falo, waxa uuna yiri “Waxaa laygu haystaa mashruuc ii fuli. Marka laga hadlayo dhaqaalaha lacagta dalka waxa la soo hadal qaaday Gobalka Banaadir, waxaana dhaqaalaha oo dhanba ka soo saarnaa Gobolka Banaadir. Waxaad garab igu siisaan in aan mideyno Canshuurta Guud ee Dalka”.
Wasiirka ayaa hadalkiisa ku soo xiray: “Hadalkayga waxaan ku soo gabagabaynayaa in arrinkan uu yahay mala-awaal iyo kutiri-kuteen la soo dhoodhoobay, mar kastana waa in la ogaadaa qoraalada saamaynta iyo dib u dhaca ku yeelanaya dalka”.
Baarlamaanka Wasiir Beyle
Hanti-dhowrka Guud ee Qaranka jawaabka ka bixiyey Warbixintii Guddiga Maaliyadda Baarlamaanka (Akhriso)
Guddoonka Baarlamaanka oo Raaligelin ka bixiyey Warbixintii Guddiga Maaliyadda, dibna ula noqday [Daawo]
Waa sidee xaaladda Muqdisho ee saaka?